लक्ष्मी जो सामान्य उपचार गराउन हस्पिटल पुगिन तर फर्किनन् घर ! आफन्त बाहिर कुरिरहे तर देख्न पाएनन ! - Nepal Insider
Home/समाचार/लक्ष्मी जो सामान्य उपचार गराउन हस्पिटल पुगिन तर फर्किनन् घर ! आफन्त बाहिर कुरिरहे तर देख्न पाएनन !
डिभोर्सको बिषयमा सल्लाह लिन आए छबि र शिल्पालाई शास्त्र पल्टाएर सुझाव दिन्छु : ज्योतिषी हरिहर अधिकारी
पोखरा छोरेपाटनका फोक्सो सुकेको रोगी ७ वर्षीय आर्यन परियारलाई बचाइदिन सक्दो सहयोग गरौं
दुनियाँ चकित् हुनेगरि सिन्धुलीमा चिनियाँ मेसिनले गर्दैछ यस्तो चमत्कार ! हेर्नुहोस (भिडियोसहित)
७ बर्षे बबितालाई यौन शोषण गर्ने खरेल पक्राउ ! आमाले काम गर्ने ठाउँमा घरी घरी बलात्कार ! यस्तो ठाउँमा लुकेको रहेछ (भिडियो हेर्नुस)